Zedify | Franchise | Franchiseek
»Amathuba weFranchise»I-Zedify Franchise
I-Zedify iyisisombululo se-zero-ekuzisweni okulethwa okuqala nokugcina emadolobheni. Sinikezela ngamabhizinisi ngensizakalo ekhulisa uhlobo lwayo lomkhiqizo ngokuletha ngendlela abafuna ngayo.
Uhlelo oluhlukile lweZedify lokuhlanganiswa okuhlanganisiwe, okulethwa okuyi-zero kubuye kube ngcono kulomuzi futhi umsebenzi wethu ukuguqula izinto zasemadolobheni nokwakha amadolobha anempilo aphumelela esizayo. Ukudiliva okungcono emadolobheni angcono.
Ukudiliva emadolobheni - inkinga
Imvelo yasemadolobheni ishintsha ngokushesha; ukukhuphuka kokuxinzeka kanye namazinga wokungcola kuholela ekufinyeleleni kwemikhawulo okwenza ukudiliva kube nzima kakhulu emadolobheni. Izinto zokugcina zamamayela okugcina ziyisigaba esisebenza kahle kunazo zonke sokuthengwa kwempahla futhi sifinyelela ku-50% wezindleko eziphelele zokulethwa. Futhi ukungasebenzi kahle, abathengi ngokuvamile abakwazi ukuqinisekiswa ngamawindi wesikhathi futhi indlela elethwa ngayo imvamisa ikhulisa ukuxinana futhi ibangela ukungcoliswa okwengeziwe. I-Zedify ixazulula lezi zinkinga futhi ithuthukise izinhlobo zamakhasimende ethu ngokuqinisekisa ukuthi abathengi bathola indlela abafuna ngayo.
I-Zedify isebenza ngokusebenzisa amadepho emaphethelweni ezindawo zasemadolobheni ezisebenza njengesango lezinto ezincane ezingena nokuphuma endaweni. Siphinda siguqukele ezimotweni ezikhethekile zemvelo yasemadolobheni siqinisekisa ukuthi siyashesha futhi sishesha futhi singathinta isikhathi esinqunyiwe abathengi abafuna ngaso. Ngokuhlanganisa ukulethwa kokuya endaweni efanayo, sisebenza kahle. Njengoba amadepho ethu esondele kakhulu ezindaweni zethu zokulethwa, singenza izindlela ezi-4 ezihlanganisiwe ngosuku, aqinisekise ukulethwa okuvumayo futhi okusheshayo.
Abagibeli bethu nemizila ihlanganiswa ngeplanethi yethu yezobuchwepheshe.
I-Zedify iyinethiwekhi enelayisense yabasebenza ngokuzimela abasebenza ngokulethwa okungu-zero enomkhiqizo ohlanganisiwe, uhlelo lwebhizinisi nesikhulumi sobuchwepheshe esabiwe. Simiswe ngokuhlukile ukukala ngenethiwekhi yethu ekhulayo yama-hubs e-UK, enikeza amabhizinisi ukulethwa okuguqukayo ngenkathi ngasikhathi sinye sinomthelela omuhle emadolobheni ethu.
IZedify njengamanje ibheke ukusetha amadepho amasha e-Ipswich naseBristol nakwamanye amadolobha asondelene ne-United Kingdom. Leli yithuba elijabulisayo lokusetha ibhizinisi lakho ngosizo nokuxhaswa okuvela enkampanini enesipiliyoni, ukuxhumana kanye nohlobo lomkhiqizo olwaziwa kuwo wonke umkhakha wezidingo zempahla zasemadolobheni.